MY REMEMBRANCE: ပုံရိပ်
Posted by puluque at Sunday, October 19, 2008
ပုံရ်ိပ်ဆိုတာ ရှုမြင်သူ၇ယ်။ ရှုမြင်ခံ အရာဝတ္ထုရယ်၊ ရှုထောင့် ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနေမှာပါ။
ကိုယ့်အိမ်ပျက်တာ ကိုယ်ပဲ ဆောက်ရမှာပါလေ--
မမ Blog List မှာ မမနာမည်ပါလို့ အမြန်လိုက်လာတာ.
မမ၀ါကို ခင်တာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်
မမ၀ါက အားလုံးကခင်တဲ့ ဘလော့ဂါမမကြီးမဟုတ်
နိုင်ပါဘူးမောင်လေးရယ်။ မောင်လေးရဲ့ စေတနာကို
အသိအမှတ်ပြုပြီး အလွန်ပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ် မောင်လေး။အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်မ တို့လဲကြိုးစားပါ့မယ်ရှင့်
ကိုပုရေ ... စိတ်ကူးလေး အတွေးလေး ကောင်းလိုက်တာ။ :)
ကိုကိုပု.. မီးမပါဘူးနော်.. ခိုးပြီး မတော်တဆခလုတ်တိုက်ရင်း ဒီပိုစ့်ကို မြင်သွားတာ.. ဟဲ..ဟဲ.. စတာပါ..
ဟုတ်ပါ့ဗျား အမှန်ပါပဲ။ ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင် ဟိုးထိပ်ကစပြီး
များများတွေး ရဲရဲရေး နိုးလောင်းဂါး ပုလုကွေး။